चुरोटको धूँवाभन्दा अगरबत्तीको धूँवा खतरनाक :: a1nepal.com.np
अगरबत्तीलाई आध्यात्मिकता मात्र नभई शान्ति र शुद्धताको प्रतीक पनि मानिन्छ । अगरबत्तीको सुगन्ध तपाईंलाई राम्रो लाग्न सक्छ र त्यसले तपाईंको मनलाई आनन्द दिन सक्छ ।हाम्रा घरका चुलो चौका, तुलसी मठ, पानी पधेरा होस् वा मन्दिर हरु र शहरका गल्लि गल्लिमा भगवानको पुजाआजा गर्दा अगरबत्ती बाल्ने चलन छ।
वास्तवमा अगरबत्तीको धूँवा त चुरोटको धूँवाभन्दा खतरनाक हुन्छ। चिनियाँहरूले गरेको अध्ययनमा अगरबत्ती बाल्दा त्यसको धूँवासँगै मसिना कणहरू निस्केर हावामा घोलिन्छन् । सुगन्धित अगरबत्तीबाट विषालु कण निस्कन्छन् र शरीरका कोशिकालाई नोक्सानी गर्छन्। अध्ययनले साबित गरेअनुसार सुगन्धित अगरबत्तीमा तीनवटा विषालु तत्त्व हुन्छन् म्युटाजेनिक, जीनोटक्सिक र साइटोटक्सिक । यिनले क्यान्सर गराउन सक्छन् ।
अगरबत्तीबाट निस्कने धूँवाबाट शरीरमा भएको जीन परिवर्तित हुन्छ र यो नै क्यान्सर अनि फोक्सोसँग जोडिएको रोगको पहिलो चरण हो । आनुवंशिक परिवर्तनले डीएनएमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ र यो नराम्रो संकेत हो ।
रक्तचाप नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्छ? ३ पटकका गोल्डमेडलिस्ट न्युरो सर्जन डा बालकृष्ण थापाको निधन करेला खाने सहि तरिका, यस्ता छन् ८ फाइदा क्याल्सियम किन आवश्यक छ ? जान्नैपर्ने कुरा सास फेर्न गार्हो हुन्छ वा दम छ? यसरी उपचार गर्न सकिन्छ प्युठान जिल्ला अस्पतालमा डिम्बाशयमा हुने जटिल खाले पानीको फोका(DERMATOID CYST) को अप्रेशन किन हुन्छ डाक्टरमाथि बारम्बार आक्रमण ? (सरला कट्टेलको विशेष रिपोर्ट) जथाभावी शुल्क लिने बिद्यालयलाई सरकारले कारवाही गर्नेः शिक्षा मन्त्री अखिल क्रान्तिकारी १२ ओटा क्याम्पसमा विजयी चर्चित र्‍यापर यमबुद्धको शव नेपाल ल्याउने अन्तिम तयारी
← छबि ओझा र शिल्पा पोखरेलको बिहे बैशाखमा	इजरायलमा कार्यरत ववी गुरुङको भ्यालेन्टाइन विशेष म्यूजिक भिडियो बजारमा →